သှေးလှူခါနီး သိထားသငျ့တဲ့အခကျြမြား။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/သှေးလှူခါနီး သိထားသငျ့တဲ့အခကျြမြား။
admin March 13, 2022	Health & Beauty Leaveacomment
သှေးလှူတယျဆိုတာဟာ လူတိုငျးပွုလုပျနိုငျတဲ့ ကိစ်စရပျတဈခုမဟုတျပါဘူး။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ သှေးလှူတော့မယျလို့ စဉျးစားဆုံးဖွတျထားတယျဆိုရငျ အောကျပါအခကျြမြားကို အရငျဖတျရှုလလေ့ာပွီး လှူသငျ့၊ မလှူသငျ့ စဉျးစားဆုံးဖွတျရပါမယျ။
တကယျလို့သငျဟာ နာတာရှညျရောဂါတဈခုခုကွောငျ့ နစေ့ဉျဆေးမှီဝဲနရေသူတဈယောကျဆိုရငျ သှေးလှူဖို့အတှကျ မသငျ့တျောပါဘူး။ “ တကယျလို့ သငျဟာ ဖြားနာလို့ ဆေးမှီဝဲနရေသူတဈယောကျဆိုရငျ သှေးလှူဖို့အတှကျ မသငျ့တျောပါဘူး။ ရောဂါပြောကျကငျးပွီး ပွနျလညျကနျြးမာလာတဲ့အခြိနျထိ စောငျ့ဆိုငျးပွီးမှသာ သှေးလှူသငျ့ပါတယျ။ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးမှီဝဲထားသူဆိုရငျလညျး နောကျဆုံးအကွိမျ ဆေးသောကျပွီးတာနဲ့ နှဈရကျတိတိ စောငျ့ဆိုငျးပွီးမှသာ သှေးလှူသငျ့ပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး Dr. John R, Hackett က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၂။ လောလောလတျလတျ ရောဂါကာကှယျဆေးထိုးထားခွငျး။
ဖြားနာလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ မေးခိုငျကာကှယျဆေးပဲဖွဈဖွဈ လောလောလတျလတျ ထိုးထားသူတဈယောကျဆိုရငျ သှေးမလှူသငျ့ပါဘူး။ ဆေးကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ ဒါရိုကျတာဖွဈသူ Thomas ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ တဈခြို့ထိုးဆေးတှဟော ကူးစကျနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ ထိုလူတှလေညျးပဲ အခြိနျကာလတဈခုအထိ စောငျ့ဆိုငျးပွီးမှသာ သှေးလှူသငျ့ကွောငျးကိုလညျး ထပျလောငျးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
၃။ မတူညီတဲ့ နရောအမြိုးမြိုးမှာ Tattoo ထိုးထားခွငျး။
Tattoo ထိုးရာမှာ အသုံးပွုတဲ့ ဆေးထိုးအပျတှနေဲ့ မှငျရညျတှကေလညျး သနျ့ရှငျးဖို့လိုအပျပါတယျ။ Dr. Heckett ရဲ့ ရှငျးပွခကျြအရ Tattoo ထိုးထားတဲ့လူတဈယောကျဟာ သှေးလှူမယျဆိုရငျတော့ အနညျးဆုံး အခြိနျ တဈနှဈထိစောငျ့ဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရောဂါပိုးတှေ အလှယျတကူ ကူးစကျဝငျရောကျနိုငျလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
၄။ HIV ရောဂါပိုးရှိသူမြား။
HIV နဲ့ အလားတူ ရောဂါပိုးမှားတှဟော သှေးထဲကနတေဈဆငျ့ အလှယျတကူ ဖွတျသနျးဝငျရောကျနိုငျလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ တဈစုံတဈယောကျဟာ HIV ရောဂါ ခံစားနရေသူဆိုရငျ သှေးလှူလို့မရပါဘူး။ Dr. Ahsan Ali ရဲ့ ရှငျးပွခကျြအရ တဈခြို့သော အသညျးနဲ့ ပကျသကျတဲ့ ရောဂါဝဒေနာတှဟော ကုသလို့မရနိုငျသလို နှလုံးနဲ့ပကျသကျတဲ့ ရောဂါတှေ၊ အသညျးကွှခွေငျး၊ အသညျးကငျဆာစတဲ့ရောဂါဝဒေနာခံစားနရေသူတှအေနနေဲ့လညျး သှေးလှူဖို့ မသငျ့လြျောပါဘူး။
၅။ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ ကဆြငျးနခွေငျး။
တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ကိုယျအလေးခြိနျဟာ ပေါငျ ၁၁၀ အောကျ လြော့နညျးနမေယျဆိုရငျ သှေးလှူဖို့ လုံးဝ မသငျ့လြျောပါဘူး။ “ ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့နညျးနတေယျဆိုတာဟာ ကိုယျတှငျး သှေးပမာဏကိုလညျ လြော့နညျးစပေါတယျ။ ထိုအခွအေနမြေိုးမှာ သှေးလှူမယျဆိုရငျတော့ လိုအပျတဲ့ သှေးပမာဏကို မရနိုငျတဲ့အပွငျ စှမျးအငျတှကေိုလညျး လြော့နညျးစပေါတယျ. . . ” ဆိုပွီး Dr. Lev Kalika မှ ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
၆။ သံဓာတျမွငျ့မားလှနျး၍သျောလညျးကောငျး၊ နညျးနလှေနျး၍သျောလညျးကောငျး။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျမှာဆိုရငျ သံဓာတျ 12.5 g/dl နဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျမှာဆိုရငျ 13.0 g/dl ရှိသငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့ အဲ့ဒီပမာဏထကျ လြော့နညျးနပေါက သှေးလှူဖို့အတှကျ မသငျ့လြျောပါဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သှေးကို ထပျခါတလဲလဲ လှူဒါနျးနကွေသူတှဟော သံဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှကေို မြားမြားစားသုံးပေးဖို့ လိုအပျသလို သံဓာတျကိုလညျး ထိနျးထားပေးနိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သံဓာတျမြားနရေငျလညျးပဲ သှေးလှူဖို့ မသငျ့လြျောပါဘူး။
၇။ လိငျတူဆကျဆံကွတဲ့ အမြိုးသားမြား။
တကယျလို့ လိငျတူဆကျဆံထားတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျအနနေဲ့ သှေးလှူဖို့ဆုံးဖွတျခကျြခထြားတယျဆိုရငျ နောကျဆုံးအကျွိမျ လိငျဆကျဆံထားတဲ့အခြိနျကနေ တဈနှဈပွညျ့ပွီးနောကျပိုငျးမှသာ သှေးလှူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လိငျမှတဈဆငျ့ ကူးစကျနိုငျတဲ့ ရောဂါပိုးမှားတှေ သှေးထဲမှာ ပါဝငျနိုငျသေးလို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျထားရတဲ့ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ ကိုယျဝနျလှယျထားရစဉျကာလအတှငျးမှာ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှ သှေးဆုံးရှုံးမှု အမြားဆုံးဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ သှေးလှူဖို့အတှကျ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
သွေးလှူတယ်ဆိုတာဟာ လူတိုင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ သွေးလှူတော့မယ်လို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များကို အရင်ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး လှူသင့်၊ မလှူသင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။
တကယ်လို့သင်ဟာ နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် နေ့စဉ်ဆေးမှီဝဲနေရသူတစ်ယောက်ဆိုရင် သွေးလှူဖို့အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။ “ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဖျားနာလို့ ဆေးမှီဝဲနေရသူတစ်ယောက်ဆိုရင် သွေးလှူဖို့အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး။ ရောဂါပျောက်ကင်းပြီး ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အချိန်ထိ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှသာ သွေးလှူသင့်ပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမှီဝဲထားသူဆိုရင်လည်း နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆေးသောက်ပြီးတာနဲ့ နှစ်ရက်တိတိ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှသာ သွေးလှူသင့်ပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး Dr. John R, Hackett က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂။ လောလောလတ်လတ် ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်း။
ဖျားနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ် လောလောလတ်လတ် ထိုးထားသူတစ်ယောက်ဆိုရင် သွေးမလှူသင့်ပါဘူး။ ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Thomas ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ တစ်ချို့ထိုးဆေးတွေဟာ ကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ထိုလူတွေလည်းပဲ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှသာ သွေးလှူသင့်ကြောင်းကိုလည်း ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၃။ မတူညီတဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ Tattoo ထိုးထားခြင်း။
Tattoo ထိုးရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးထိုးအပ်တွေနဲ့ မှင်ရည်တွေကလည်း သန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Dr. Heckett ရဲ့ ရှင်းပြချက်အရ Tattoo ထိုးထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ သွေးလှူမယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး အချိန် တစ်နှစ်ထိစောင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရောဂါပိုးတွေ အလွယ်တကူ ကူးစက်ဝင်ရောက်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ HIV ရောဂါပိုးရှိသူများ။
HIV နဲ့ အလားတူ ရောဂါပိုးမွှားတွေဟာ သွေးထဲကနေတစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ HIV ရောဂါ ခံစားနေရသူဆိုရင် သွေးလှူလို့မရပါဘူး။ Dr. Ahsan Ali ရဲ့ ရှင်းပြချက်အရ တစ်ချို့သော အသည်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေဟာ ကုသလို့မရနိုင်သလို နှလုံးနဲ့ပက်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ၊ အသည်းကြွေခြင်း၊ အသည်းကင်ဆာစတဲ့ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့လည်း သွေးလှူဖို့ မသင့်လျော်ပါဘူး။
၅။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းနေခြင်း။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ပေါင် ၁၁၀ အောက် လျော့နည်းနေမယ်ဆိုရင် သွေးလှူဖို့ လုံးဝ မသင့်လျော်ပါဘူး။ “ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့နည်းနေတယ်ဆိုတာဟာ ကိုယ်တွင်း သွေးပမာဏကိုလည် လျော့နည်းစေပါတယ်။ ထိုအခြေအနေမျိုးမှာ သွေးလှူမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ သွေးပမာဏကို မရနိုင်တဲ့အပြင် စွမ်းအင်တွေကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်. . . ” ဆိုပြီး Dr. Lev Kalika မှ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
၆။ သံဓာတ်မြင့်မားလွန်း၍သော်လည်းကောင်း၊ နည်းနေလွန်း၍သော်လည်းကောင်း။
ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာဆိုရင် သံဓာတ် 12.5 g/dl နဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်မှာဆိုရင် 13.0 g/dl ရှိသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီပမာဏထက် လျော့နည်းနေပါက သွေးလှူဖို့အတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သွေးကို ထပ်ခါတလဲလဲ လှူဒါန်းနေကြသူတွေဟာ သံဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို များများစားသုံးပေးဖို့ လိုအပ်သလို သံဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းထားပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သံဓာတ်များနေရင်လည်းပဲ သွေးလှူဖို့ မသင့်လျော်ပါဘူး။
၇။ လိင်တူဆက်ဆံကြတဲ့ အမျိုးသားများ။
တကယ်လို့ လိင်တူဆက်ဆံထားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သွေးလှူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးအကြိ်မ် လိင်ဆက်ဆံထားတဲ့အချိန်ကနေ တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ သွေးလှူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ သွေးထဲမှာ ပါဝင်နိုင်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရစဉ်ကာလအတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ သွေးဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သွေးလှူဖို့အတွက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Previous စုံတှဲတှတေိုငျး ကွုံတှတေ့တျတဲ့ ပွဿနာအသေးအဖှဲလေးမြား။
Next ပိုတကျဆီယမျဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြား။